Ingabe kukhona ubungane phakathi kwendoda nowesifazane?
Kukholelwa ukuthi ubudlelwano obuhle phakathi kwabantu abesilisa nabesifazane abukwazi. Ingabe kunjalo? Yini engaba lula kunokuthola abangane? Kubi kuwe - futhi ushayela inombolo yocingo efundwe ngenhliziyo bese ukhala ebhodini, cela ukuza, noma uthuthuke futhi uya ebhayisikili ndawonye, ​​futhi mhlawumbe akekho oya enkundleni, bese umngane efika ezosiza. Yebo, ubungane ngumqondo oqhubekayo, kungakhathaliseki ukuthi unyaka nesikhathi sosuku. Futhi ebuhlotsheni phakathi kwendoda nowesifazane konke kuzoba okufanayo, uma kungenjalo "kodwa" - akukwazi ukuhlala unomphela, imithetho yomhlaba wonke yokukhanga ibonakala ibe namandla kunobungane obuhle. Kungakhathaliseki ukuthi kukhona ubungane phakathi kwendoda nowesifazane kuyimfihlakalo.
Kunezici ezinjalo eziyisisekelo zobuhlobo bobuhlobo bobulili obufanayo:
• izithakazelo ezivamile - abantu bakhulumisana, ngoba banesithakazelo ndawonye, ​​bathanda izinto zokuzilibazisa, izinto zokuzilibazisa, ukuzijabulisa, bahlale benento yokukhuluma;
• uthemba - ungasho noma yini efika emqondweni wakho ngaphandle kokwesaba ukuthi ngeke uqondwe;
• Ukuphila okuhlukile - abangani bachitha isikhathi esiningi ndawonye, ​​kodwa banezinhlelo ezahlukene zokuphila.
Ingabe wonke amaphuzu afana nobungane phakathi kwendoda nowesifazane? Futhi kungakanani? Ake sicabangele ukuhluka okukhona.
Ngokuvamile yonke intombazane yayinomngane womfana, egijima naye egcekeni lonke usuku, edlala efihla futhi efuna, ekhuphuka emithini, ehlezi esikhungweni sesikole, enza umsebenzi wesikole ndawonye futhi ehambahamba esikoleni ngesikhathi sokuphumula. Izinhlobonhlobo kungenzeka ukuthi zihluke kakhulu, kodwa enkulisa, ezemidlalo yezemidlalo noma esikoleni - umngane wangempela oqiniseke ukuthi unayo. Ube umngane naye, yebo! Sasidlala ndawonye, ​​sahleka, konke kwakungathi kufanele kube khona. Ingabe kuphela ubungane? Izazi zengqondo zithi ku-70% yobuhlobo bomntwana obuphakathi komuntu wesilisa nowesifazane kukhona ukukhangwa ngokomzimba, izingane kuphela aziqondi lokhu okwamanje, kodwa ngokuyisisekelo zithandana, zithanda ukuchitha isikhathi ndawonye. Ngokuyinhloko, ubungane bezingane eziseduze zezingane zigeleza ebuhlotsheni bothando phakathi nentsha, futhi lokhu kugcina ubuhlobo obuseduze, buhlakulele ebuhlotsheni obunzima nezinkulungwane zokungaboni kahle nokungafani phakathi kwendoda nowesifazane. Uma ukuthuthukiswa okunjalo kungenzeki, khona-ke bayagcizelela umuzwa wokukhangwa ngokocansi futhi ngokushesha noma kamuva ungaphuma. Umhawu ofihliwe futhi ngisho nangokwengeziwe umngane ohlala njalo wobuhlobo obunjalo. Futhi izenzakalo zingashintsha, njengasefilimu ethi "Umshado womngani omkhulu," lapho intombi yomngane ibhekwa njengomncintiswano. Futhi lokhu kuyinto evamile kakhulu, emva kwakho konke, isikhathi eside ukuxhumana nomuntu, ukwazi izinto ezithandayo kanye nezintshisekelo, siqala ukuyibiza ngaphandle kokuyiqonda. Cabanga ngalokho ozokwenza uma umngane wakho enquma ukushada noma ukuya kwenye idolobha?
Ezimweni ezingu-95 ezingaphezu kwekhulu ebuhlotsheni obuseduze phakathi kwendoda nowesifazane, omunye umuntu uzizwa kakhudlwana kumuntu kunesihawu, futhi ethemba esikhathini esizayo sokuba nobuhlobo obunzima. Futhi manje, kuze kube yilapho umngane (noma intombi) efika engqondweni yakhe, okungenani abe eduze kwakhe, ngezinga elithile alawule yena, futhi ngesikhathi esifanayo ukuze alandele impilo yakhe, anikeze iseluleko, hhayi njalo ngaso sonke isikhathi. Umngane uzokugwema ngokushesha noma kamuva, ngoba othanda ukuzwa ngaphansi kwe "cap"? Ngakho-ke kungcono ukuyeka isimo, unikeze inkululeko kanye nomngani wakho - ngakho maduzane uzoqonda ukuthi ngaphandle kwakho akakho ndawo.
Ukuze uqonde indlela ozizwa ngayo ngomngane wakho wesilisa, phendula imibuzo embalwa: 1. Ukulungele ukuvala amehlo akho kuningi ngisho nokungaphumeleli okukhulu komngani wakho? 2. Ubuhlobo bakho buyoshintsha yini uma izici zakhe zangaphandle "zingekho ekuthandeni kwakho"? 3. Ukwazi ukuthi umngane wakho ngosuku oluthandana naye, ubhala ngokuthula nge-SMS-ki? Uma uphendule kahle okungenani enye yale mibuzo, khona-ke ubungane bakho buyisenzo sokuzilibazisa.
Izakhamuzi eziningi zengqondo kanye nezocansi zithi ubuhlobo phakathi kwendoda nowesifazane akuyona inqubo yonke yemvelo, ngoba noma ngabe kunjalo sithandana njengento yezocansi. Emaminithini okuqala okuthandana nendoda inake amehlo emingcele yangaphandle yowesifazane, izwa ukuthi iphunga futhi ithinte. Kunzima ukumelana nokukhanga, futhi kungenzeka ukuthi uzokwazi ukuvimbela ukukhathazeka kuphela isikhathi. Cishe into efanayo kwenzeka nabesifazane abahle. Futhi, endleleni, noma yikuphi ukuhlobana phakathi kwendoda nowesifazane kuyinto ekhethekile kakhulu yokushintshanisa amandla, ngisho noma bobabili ababambiqhaza ebuhlotsheni obunjalo bethi lokhu kungumngane nje. Kodwa bakuthola kalula ukuvuselelwa ngokomzwelo. Ithembo liphuma, izihlathi ziphenduka pink, kukhona ukukhanya emehlweni abo bobabili, ukuhleka kuyathathelana - lena yimithetho yemvelo, akukho lutho olungenziwa ngakho. Ngakho-ke, ochwepheshe emkhakheni wezingqondo zengqondo bathi ngokushesha noma kamuva ubuhlobo phakathi kwendoda nowesifazane buphela ekuthandweni. Futhi bobabili ngokugcwele baqonda lokhu kungavinjelwa kusukela emaminithini yokuqala okujwayele, ngisho noma bengakuvumeli bona.
Kunokuhluka okunye okunye okungafani nobungane bobulili obuhlukile. Futhi, endleleni, isiteleka esiphezulu yilokho bebevele bengabathandi, ngokuvumelana kwabo bahlakazekile, kodwa abafuni ukuyeka ukuxhumana okungokomoya noma kwebhizinisi. Ubungane obunjalo buqotho kakhulu futhi buvulekile, azikho izimfihlo noma imidlalo phakathi kwabalingani. Yiqiniso, njengoba izingxenye zakho zesibili zizobuka ubuhlobo obunjalo - lo omunye umbuzo! Ukuze uqonde ukuthi yini ebangela ubungane bobulili obuhlukile cishe akunakwenzeka ngisho nabangane. Lo mdlalo ngezinye izikhathi uyathakazelisa, ngezinye izikhathi kuyingozi. Ukuzikhethela kungokwakho!
Ukukwazi namadoda ashadile
Umhawu wezingane kubazali
Lokho umuntu akwenza ukuheha owesifazane
I-TV ithinta kanjani izingane?
I-Dish ye-Pumpkin Dish
Ukuthuthukiswa kwengane ku-trimester yesibili yokukhulelwa
Ubuhle nempilo ngesikhathi sokukhulelwa
I-Yoga ne-Tibetan yokuvocavoca yokukhululeka kokucindezeleka
Izinambuzane zezitshalo zokuhlobisa
Ingulube enezinyosi ne-ginger
O Nkulunkulu, yimuphi umuntu: Pavel Priluchny wayemthanda isithombe echibini
I-Spaniak ihamba ne-sorrel
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngokugeza?